Iwu | Onyinye Regwọ Ọrụ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Ịhụnanya, mmekọahụ, Intanet na iwu nwere ike ịmekọrịta n'ụzọ dị mgbagwoju anya. Ụgwọ Ụgwọ Ụgwọ ahụ nwere ike inyere gị aka ịghọta ihe iwu ahụ pụtara nye gị na ezinụlọ gị.
Na UK, onye nwere foto agụụ mmekọahụ nke ụmụaka (onye ọ bụla na-erughi afọ 18) nwere ike ịda iwu nke ịda iwu. Nke a gụnyere n'otu nsọtụ, ndị okenye kpaliri ịchọ mmekọrịta ha na ụmụaka, site n'aka ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eme ma zigara ndị gba ọtọ ma ọ bụ ndị gba ọtọ ma ọ bụ nke nwere onwe ha n'ọdịmma nke ịhụnanya, na ha nwere ụdị ihe oyiyi ahụ.
Anyị na-elekwasị anya na ọnọdụ iwu na Britain, mana okwu ahụ yitụrụ n'ọtụtụ mba. Biko jiri saịtị a dị ka mmalite.
N'akụkụ a, Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ na-achọpụta ihe ndị na-esonụ:
• Ịhụnanya, Mmekọahụ, Intanet na Iwu ahụ
• Nkwupụta Nnyocha afọ
• Afọ nke nkwenye
• Kedu ihe bụ nkwenye na iwu?
• Nkwenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma
• Kedu ihe nkwenye na-eme?
• Mmekọahụ n'okpuru iwu nke Scotland
• Mmekọahụ n'okpuru iwu England, Wales & Northern Ireland
• Kedu onye nwere mmekọahụ?
• Megwara porn
• Nbili na mpụ nwoke na nwanyị
• Ụlọ ọrụ porn
• Mmekọahụ kamera